IAmazon Chime lolona khuphiswano lubaluleke kakhulu kwiSkype | IPhone iindaba
IAmazon iyaqhubeka ukwahlula iimveliso zayo kakuhle, kwaye ngeli xesha iza ngohlobo lwesoftware eneChime, isicelo esitsha sokwenza ividiyo kunye neenkomfa zomsindo phakathi kwabasebenzisi abaliqela eziya kuvumela ukuba kube lula ukwenziwa kolu hlobo lwefomathi. Kwaye enye yeengxaki ze-Skype yinto yokuba iincoko zihlala zinzima ngokulula ngenxa yoqwalaselo kunye neengxaki zonxibelelwano. CU-hime uthembisa ngokuchaseneyo, inkqubo yokufowuna engenasiphazamiso kunye nenkqubo yenkomfaUbuncinci yile nto bayathembisayo kwiphulo labo lokuthengisa kwaye emva koqhakamshelwano lokuqala, kubonakala kuyinyani.
Esi sicelo, sinokuba yintoni enye indlela, sisicelo seplatform ezininzi, esiya kuhambelana neMac, Windows, iOS kunye ne-Android. Olunye uluvo olugqibeleleyo, kuba iifowuni zeWhatsApp zevidiyo kunye neenkomfa zevidiyo zeSkype azingeni nzulu njengoko kufanelekile kwimeko yobungcali. IAmazon ithembisa ngevidiyo ekumgangatho ophezulu ngokulungileyo ividiyo ibulela kumava akho nge IiNkonzo ze-Amazon Web, ukuthatha ngokulula njengeflegi, ngamafutshane, bafuna isebenze kwaye bayenze kakuhle, ngaphandle kwempumelelo, bethembisa ukufika nokusebenzisa.
Isicelo esisiseko siya kuvumela iinkomfa phakathi kwabantu ababini simahla ngaphandle kwentlawulo, nangona kunjalo, uhlobo oluDibeneyo luya kuvumela i-2,50 kuphela ngenyanga Unokwenza, umzekelo, usebenzise umsebenzi wokwabelana ngomnxeba kwaye wenze iinkomfa zevidiyo ngenani elikhulu labasebenzisi. Ummangaliso uza nobhaliso lwe-Pro, malunga nee-euro ezingama-15 ngenyanga, ukuxhasa iinkomfa zevidiyo ukuya kuthi ga kubantu abali-100, ngemisebenzi yokurekhoda umnxeba kunye noseto oluninzi oluya kusivumela ukuba silwenze olu hlobo lwenkomfa ukuya kwinqanaba lokudinwa.
Ngaba iya kuba sisibetho sokugqibela kwi-Skype? Isicelo sokuba ngaphandle kokufuneka, sivelisa intiyo engenakuthelekiswa nanto ngenxa yokungasebenzi kakuhle kwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » IAmazon Chime lolona khuphiswano lubaluleke kakhulu lweSkype